Camera nametraka amin'ny fanambanin'ny tany lalina indrindra Lake - News Fitsipika
Camera nametraka amin'ny fanambanin'ny tany lalina indrindra Lake
Mpahay siansa efa nametraka lahatsary fakan-tsary eo amin'ny ambany ny Farihin'i Baïkal izay mamindra lahatsary mivantana amin'ny aterineto. Ireo liana dia afaka mandinika ny fiainana eto amin'izao tontolo izao ny lalina farihy, ny ambony indrindra halalin'ny izay Mahagaga 1,642 metatra (5,287 tongotra.), raha ny halaliny dia midika 744 metatra (2,440 feet).
Ny mpahay siansa tonga ara-potoana mba mametraka ny fakan-tsary teo anoloan'ny farihy dia rakotra ranomandry. Ny tetikasa fakan-tsary faharoa dia midika fametrahana amin'ny iray na dia lalina kokoa amin'ny hoavy tsy ho ela. Miisa maherin'ny 15 fakan-tsary dia nikasa ny ho farihy mampiseho ny fiainana anaty rano.
24112	0 Facebook, International Traffic in Arms Fepetra, Irkutsk, Lake, Farihin'i Baïkal, Rosia, Siberia, Soundcheck, Telegraph Agency avy amin'ny Firaisana Sovietika, anaty rano